Jasiirada Burunaay oo Si Buuxda Shaaca Uga Qaaday In Ay Dhaqan Gelinayso Shareecada Islaamka – idalenews.com
Burunaay waa Jaziiradda sadexaad ee ugu ballaaran Caalamka,waxayna dhinac ka saaaran tahay wadanka ugu Muslimiinta badan dunida ee Indonesia.
Jaziiradda Burunaay waxaa dadka dega tira ahaan ay gaaraan 400 oo kun oo qof,waxayna isugu jiraan Muslimiin iyo dadka kale oo Diima kale heysta.
Jaziiraddan waxaa maamula Boqor Muslim ah oo lagu tiriyo dadka ugu dhaqaalaha badan Dunida, waxaana lagu magacaabaa Suldaan Xasan Balqiya oo da’diisu gaareyso 67 sana jir.
Boqorka Jaziiradda Burunaay waxa uu yiri “dadka qaar waxay yiraahdaan Axkaamta Allah waa kuwa adag, laakiin Allah ayaa leh, Axkaamteyda waa kuwa fudud”, isagoona intaa ku darey in kowda bisha May Jaziiradda oo idil lagu maamuli doono Shareecada Islaamka.
Jaziiradda Burunaay waxaa kajira laba Garsoor oo mid uu yahay Madani, halka kan kalena uu yahay Islaami, waxaana la ogayn sida dadka Muslimiinta aan ahayn ay ku aqbali doonaan Go’aanka uu gaarey Boqorkooda.
Baraha Bulshada ay ku kulanto ayaa waxaa lagu arkayey dad kasoo jeeda Burunaay oo si aad ah kaga careysan Go’aanka Suldaanka, inkastoo aan la ogaynTallaabada ay qaadi doonaan.
Haddii uu dhaqan galo Go’aanka Suldaan Xasan,waxay Burunaay noqoneysaa meel Hooy u ah Shucuubta Muslimiinta ah, waxayn sidoo kale ka dhigantahay dowladda kaliya ee sida muuqata u dabaqeysa Shareecada Islaamka.
Ciidamada Itoobiya oo sarkaal katirsan Ciidamada Militariga ku xiray Degmada Luuq Ganaane.